Dooddii hogaamiyaasha xisbiyada Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dooddii hogaamiyaasha xisbiyada Sweden
La daabacay onsdag 14 januari 2015 kl 14.47
Karlsson: baarlamaanka hakalo noqdo kalsoonida Löfven
Hogaamiyaha SD Mattias Karlsson oo ka dalbaday baarlamaanka kalsooniyada in lagala noqdo Stefan Löfven (S). Foto: TT
Maanta waxaa baarlamaanka Sweden lagu qabtay doodii ugu horeysey sannadkan ee dhexmartay hogaamiyaasha xisbiyada. Dood oo sidoo kale aheyd middii ugu horeysey oo ay Anna Kindberg Batra ka qaybgasho iyada oo ah hogaamiyaha xisbiga Moderaterna.
Raa'iisalwasaaraha Stefan Löfven oo dooda billaabay ayaa ku billaabay in uu xuso banaanbaxyadii loodhigey xoriyadda hadalka ka dib wareerkii argagaxisada ahaa ee todbaadkii hore magaalada Paris lagu qaadey wargeyska Charlie Hebdo. "Hedafka argagaxisado waa ay iskukaayo diraan, annagana waa in aan tusenaa awooda bulshada furfuran".
Doodda baarlamaanka maanta ka dhacdey ayaa timid ka dib heshiiskii december ee ay gareen xukumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee alliansen. Heshiiska oo loogu sahlay xukumadda aan aqlibiyadda ka heysan baarlamaanka hogaaminta dalka.
Raa'iisalwasaare Stefan Löfven ayaa sheegay in heshiiska xukumadiisa iyo alliansen ay timid xilligii loo baahnaa, ugana mahadceliyey Alliansen masuuliyadda ay iska saareen xal u helida xaaladda siyaasadeed ee dalka ku sugnaa.
- Heshiiskan waxuu ahmiyada ka qaadayaa ciyaarta ku dhisan xeeladeysiga, siinayana ahmiyad arrimaha kalo gedisan ee siyaasadeed.
Anna Kindberg Batra hogaamiyaha cusub ee xisbiga Moderaterna ayaa ku jawaabtay in xukumadda Löfven kaalinteeda waxqabad ay gabaabsi tahay iyada oo Batra sheegtey in xukumaddaan waxqabadkeeda uu aad uga yaryahay marka loo barbardhigo xukumaddii dalka soomaray.
- Maanta oo dalka wajahayo sida uu ra'iisalwasaarahaba sheegay caqabo badan, waa in aan weydiiyaa ra'iisalwasaaraha sababta xukumadiisa waxqabadkeeda u yartahay?
"Ma waxay tahay in aan jawaabtaada u qaato in aysan jirin waxqabad idiin qorsheysan", ayey Batra weydiisey ra'iisawasaaraha, raaciseyna in aan waxweliba lagu eedeyn karin hal xisbi oo ay ula jeedey xisbiga SD. Laakiin ra'iisalwasaaraha ayaa tilmaamey in xaaladda baarlamaani ee dalka ku sugnaa kahor heshiiska december ay ahayed mid goonideeda leh:
- Xaaladda baarlamaanka ku jirey dayrtii waxay aheyd mid goonideeda leh, taas oo keentey in miisaaniyadeeda dhacdo. Miisaaniyadaas waxaa ku jiray hindisiyo u sahli lahaa in dhallinyarada in ay laguta la gasho suuqa shaqada, laakiin wey dhacdey, waxaase weydiin mudan in aaad hadda ku qanacsan tahiin rideeda. Suaalsha waxay tahay sidee noqoneysaa xaaladda shaqo la'aan ee dhallinyarada? Haddan kuu sheego, miisaaniyadeena wey dhacdey balse taa micnaheeda ma ahan in aan faraha ka laabaneyno arrinta. Wax ka qabadkeeda iyo ka xaajoodkeedana hadda waan billownay, ayuu yeri Stefan Löfven.
Hogaamiyaha xisbiga Folkpartiet Jan Björklund ayaa doodan intii ay socotay welwel ka muujiyey hab u dhaqanka Ruushka, asaga oo taas u soo qaatay in ay tahay sabab ay Sweden ugu biirto gaashaanbuurta Nato. Waxuu culeys ku saaray ra'iisalwasaare Löfven in xisbiyadda ku bahoobey ay doonayaan in baaritaan lagu sameeyo sidii Sweden ugu biiri laheyd Nato:
- Afar xisbi oo ku jiray lixdii xisbi ee heshiiska december gaaray oo sidoo kale rabo in ay wadahadal ka yeeshaan arrimaha difaaca. Afartaa xisbi ayaa dooneysa in baaritaan lagu sameeyo ka mid noqoshaha Nato. Afartaan xisbiya ayaa heysta xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka iyo codadka ugu badan ee codbixiyaasha markaa loo barbardhigo labada xisbi ee diidan arrinkan, ayuu yeri Jan Björklund isaga oo labadaas xisbi kalo jeedey xisbiyada dowlad wadaaga ah ee Socialka iyo Miljöpartiet.
Laakiin jawaabta Stefan Löfven uu ka baxiyey baaritaan lagu sameeyo ka mid noqosho Nato ayaa noqotay maya cad. Halka Björklund ku weeraray in Löfven suaal aheyd maxaa uga baqanaysaa baaritaan soo kordhinaya aqoon dheerad ah.
Dhanka kale markii dooda soogaartay kusimaha hogaanka xisbiga Sverigedemokraterna Mattias Karlsson waxuu baarlaamnaka ka dalbatay in kalsooniyada lagala noqdo raa'iisalwasaare Stefan Löfven:
- Hogaaminta aan aragnay dhowrkaan billow ma ahn hogaaminta ay Sweden u baahan tahay si aan uga gudubno caqabaha aan wajaheyno sannadyada fooda nagu soohaysa. Anniga oo cuskanaya arrimaha aan horey u soo sheegay iyo qodobka afraad ee xeerka dowladda, waxaan anniga oo u hadlaya dhamaan xildhibaanda ee xisbiga SD dalbanaynaa baarlamaanka in uu kalo noqdo kalsoonida ra'iisalwasaaraha Stefan Löfven.
Baaqaas kalsooni kalo noqoshada xukumadda ayey aaminsan yahiin xeeldheerayaasha in aysan ahaan doonin ay dhaq jalaq u siiyaan xisbiyada kale ee baarlamaanka, taas oo ka micno ah in SD keli ku ahaan doonto iskudeyga rididda xukumadda Löfven. Dalabka SD ee ah in kalsooniada looqaado xukumadda ayaa sida qaynuunka qabo ay tahay baarlamaanka in uu guddogalo saddex maalmood ka dib markii la soojeediyo kalsooni kalo noqosho ka dhan ah xukumadda.
SD oo ku adkaysanaysa in ay codka kalsoonida u qaadaan Löfven
onsdag 14 januari 2015 kl 09.48
Doodii koobaad sannadkan ee hoogaamiyaasha oo dhawaan baarlamaanka ka billaabmatay
onsdag 14 januari 2015 kl 08.59